Sidee ayuu Sonkorowgu u yimaadaa?
Sidee cudurka macaanku u yimaadaa?
Waqtiga: 2019-08-23 Hits: 315
Waxaa guud ahaan la aqbalaa in nooca sonkorowga 2 badankiisa ay ka dhashaan qaab nololeed aan caafimaad qabin. Gaar ahaan si gaar ah, dadku waxay si fiican wax u cunayaan oo ay jimicsi u yaraadaan. Dabeecadda noocan ahi waxay sababi kartaa dhibaatooyin: qaadashada xad dhaafka ah ee kaloorku ma gubo laakiin waxay ku ururtaa jirka, waxay isu beddelaysaa gulukoos, markii ay ku badato sonkorta iyo dhiiga, islet-ka aadanaha ayaa si otomaatig ah u qarin doona insulin badan si loogu isticmaalo isticmaalka gulukooska.
Laakiin, markay hawadu jaban tahay, dadku ma garanayaan, xitaa waxay cunaan wax badan, jimicsi yar, haddii arrimahu sidan oo kale sidan u socdaan, Jasiiradda ayaa buuxsamaysa, mar dambe ma qarin karaan insulin badan marka sonkorta dhiigu si dabiici ah u kordho.
Sonkorowgu wuxuu dhacaa marka heerarka gulukoosta dhiiggu ay gaaraan ilaa heer gaar ah.
Waxaa lagu sharaxay fikradaha caafimaad, sonkorowgu waa cudur daba-dheeraada, cilladaha dheef-shiid kiimikaadka oo ay sababto la'aanta insulin la'aanta ama iska caabbinta insulin, oo ay weheliso dufanka, borotiinka, biyaha iyo ciladaha dheef-shiid kiimikaadka ee lagu garto hyperglycemia daba-dheeraada.
Sonkorowga, dadku waxay u muuqan karaan astaamo sida "seddex geesood iyo mid yar" ---- in badan cun, cab kaadi aad u badan iyo miisaan lumis. Laakiin dad badan ayaan lahayn astaamahan. Marka, ha u maleynin in "cunno wanaagsan leedahay" ay tahay "xaalad jireed oo wanaagsan".
Lifaaqa: astaamaha lagu garto cudurka macaanka
Heerka gulukooska dhiigga ee loo yaqaan 'Venous Plasma glucose' (mmol / L)
Calaamadaha caadiga ah ee cudurka macaanka (polydipsia, polyuria, xad-dhaafka ah, miisaanka oo yaraada) oo lagu daro kala-sooc la'aan
tijaabada sonkorta dhiiga
Soonka sokorta dhiiga
2 saacadood postprandial gulukoosta dhiigga
Astaamaha cudurka macaanku ma jiraan, waxay u baahan yihiin in lagu celiyo
Fiiro gaar ah: sokorta dhiiga sooman waxaa loola jeedaa ugu yaraan saacadaha 8 bilaa cunto ah; gulukoos dhiig ee dhif ah micnaheedu waa iyada oo aan tixgelin la siinin waqtiga cuntada ugu dambeysa sidaas darteedna looma adeegsan karo in lagu ogaado cudurka sokorta ee daciifka ah ama u dulqaadashada gulukoos ee daciifka ah.
Bogga Hore: Markaad sooman tahay heerka gulukooska dhiigga ayaa ka hooseeya kan caadiga ah ...
Bogga Dambe: Maxaad sonkorow u qabtaa?